Miangavy ny Twitter ny governemanta Indiana mba hanala an’ireo tatitra “manely tsaho” mikasika an’i Kashmir · Global Voices teny Malagasy
Kaonty efatra mbola afaka hidirana, roa efa natsahatry ny Twitter
Voadika ny 27 Septambra 2019 7:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, عربي, русский, Español, Italiano, English
Mpitandro filaminana ivelan'ny tafika indiàna niatrana ao Srinagar taorian'ny nametrahan'ny fitondrana tsy fahazoana mivoaka alina tamin'ireo faritra sasantsasany tao amin'ny lemak'i Kashmir. Sary navoaka tamin'ny 25 May 2019. Avy amin'ny kaonty Instangram an'i Ieshan Wani. Nahazoana alalana.
Tamin'ny 5 Aogositra teo, nofoanan'ny governemanta Indiana izay tarihin'i BJP ny andininy faha 370 tao amin'ny lalàm-panorenana Indiana izay nanaiky ny sata fizakantena manokana ho an'ny Fanjakan'i Jammu sy Kashmir izay nifandroritana, tamin'ny fizaràna azy ho faritany roa – Jammu & Kashmir ary Ladakh. Noho ny tahotra an'ireo fihetsiketsehana sy hetsipanoherana, tsy navelan'ireo manampahefana hivoaka ny tranony ireo mpitarika politika anjatony sy ireo mpiara-miasa aminy no sady tsy navela ho afaka hiditra amin'ireo tambajotra finday, antso an-tariby ary tambajotra aterineto.
Maika: misy korontanana be hita amin'ny aterineto voarakitra ao #Srinagar, #Kashmir miaraka amin'ny fidirana amin'ny backbone notapahan'i India amin'ny ampahany goavana, nanomboka tamin'ny 18h 00 UTC; mametraka loza avy hatrany ho an'ny fiarovana sy ny zon'ireo olona ilay fanapahana, tranga mbola tsy mifarana #KeepItOn
Vakio ity: Foanan'ny governemanta Indiana ny sata manokan'i Kashmir, sady ambarany ny fisamahana
Miaraka amin'ny tsy fisiana fifandraisana ao anatin'i Kashmir, mampiasa Twitter ireo mpanao Aterineto any rehetra any mba hizaràna vaovao. Io no mahatonga ny governemanta Indiana handray fepetra amin'ireo kaonty Twitter sasantsasany izay ahiahiany ho manaparitaka vaovao diso mikasika ny hetsika mahabe adihevitra ao Kashmir.
Ny 12 Aogositra, nilaza ireo media teo an-toerana fa nangataka ny Twitter ny minisitry ny Atitany Indiana mba “hampiato” an'ireo kaonty valo nanaparitaka “vaovao tsy marim-pototra sy ireo tsaho hanakorontanana ny fandriampahalemana sy fitoniana” ao Kashmir. Nampangain'ny governemanta ireo kaonty ireo ho nanao “fanentanana manohitra an'i India momba an'i Kashmir sy ny andininy faha 370″, manitsakitsaka ny lalàna Indiana mikasika ireo teknolojiam-baovao. Ny andininy faha 69A amin'ny lalàna mikasika an'ireo teknolojiam-baovao ao India dia mandrara ny vontoatiny rehetra lazaina ho mandrahona ny “fiarovana ny Fanjakana, ny fiandrianam-pirenena, ny maha-iray tsy mivaky na ny fiarovana an'i India”.
Ny marina, ampangain'ny governemanta Indiana sy ireo mpanara-dia azy ho “diso” na ho toy ny hetsika fampielezankevitra tarihin'ny Sampam-pitsikilovana na ny Tafika Pakistaney izay vaovao kely mipongatra mikasika ny zavamisy ao Kashmir. Efa hatry ny ela no nampangain‘i India i Pakistana ho nanampy ireo mpikatroka mba hitsofoka any Kashmir mba hanatanteraka asa fanakorontanana ao. Namaly ny fanalàna ny zo fizakantena ho an'i Kashmir i Pakistana tamin'ny alalan'ny fampiatoany ireo fifanakalozana ara-barotra amin'i India sy tamin'ny alalan'ny fampihenana ireo fifandraisany amin'i India.
Ohatra, nampametra-panontaniana ny fandrakofana nataon'ny BBC taorian'ny tatitra nataony tamin'ny 9 Aogositra hoe nitifitra ary nampiasa entona mandatsa-dranomaso ny polisy mba hanaparitahana an'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Soura, Srinagar. Nilaza ny governemanta Indiana fa tsy nisy velively ny fihetsiketsehana ary tonga tao amin'ny Twitter ireo mpanaratsy mba hamely ny BBC sy hiampanga azy ho nandefa “vaovao diso”. Etsy andininy, ny hery famoretana an'ny (CRPF), polisin'ny ao Jammu sy Kashmir, ary ireo masoivoho hafa misahana ny fiarovana dia nampitandrina an'ireo Indiàna mpampiasa media sosialy mba tsy hinohino foana an'ireo “vaovao diso” aparitaka eo amin'ireo media sosialy.
Ny lisitr'ireo kaonty Twitter kendrena ho foanana dia ahitana an'ireo kaonty an'ny Kashmiri mpikatroka monina ao Islamabad: Madiha Shakil Khan (@Red4Kashmir), mpanao gazety Pakistaney, Arshad Sharif (@arsched) mpanoratra sy mpilaza vaovao ary mpanentana amin'ny fahitalavitra , Mary Scully (@mscully94) britanika mpanao gazety tsy miankina, sy ny Feon'i Kashmir (@kashmir787), izay iray tamin'ireo kaonty an'ny Our Voice Matter, tranonkala media an'ny olom-pirenena miorina ao Pakistàna. Tohin'ny fanafoanan'i India ny andininy faha 370, nampiasaina ireo kaonty ireo mba hianmpangàna ireo politika sy fomba fanao Indiana ao Kashmir ary koa mba hanohanana ny fizakantenan'ilay faritra. Tsy nandraisan'ny Twitter fepetra mihitsy ny momba ireo kaonty ireo ary, tamin'ny fotoanan'ny namoahana ny lahatsoratra, mbola afaka nidirana avy any India nidirana hatrany ireo kaonty efatra ireo.
Mitazona ny politika “firenena nesorina” ny Twitter, politika hahafahan'ilay orinasa manivana ireo bitsika na ireo kaonty manokana ao anatin'ny firenena iray, ho valin'ny didy iray avy amin'ny governemanta manaporofo fa tsy ara-dalàna ireo bitsika raha araka ireo lalànany eo an-toerana. Mandefa tsy ankiato fangatahana famafàna any amin'ny Twitter hatrany ireo tomponandraikitra Indiana noho io politika io. Araka ny tatitra nataon'ny Transparency, nandritra ny enim-bolana faharoa tamin'ny taona 2018, naharay fangatahana fanafoanana miisa 667 avy tamin'ireo tomponandraikitra Indiana ny Twitter ka kaonty 2 228 no voakasik'izany, 2 isanjato tamin'ireny fangatahana ireny no nomen'ilay vovonana valiny nahafapo.
Araka ny voalazan'ireo media, ireo kaonty efatra hafa lasibatry ny governemanta Indiana mba ho foanana dia ny: @sageelaniii,@sadaf2k19, @RiazKha613 ary ny @RiazKha723. Ny kaonty @sageelaniii dia nibitsika tamin'ny anaran'i Syed Ali Geelani, Kashmiri iray mpitarika mpitaky fizakantena, na dia nolazaina aza fa tsy tena kaontiny izany. Naaton'ny Twitter ny kaontin'i @sageelaniii sy @sadaf2k19 noho ny antony fanitsakitsahana ireo fitsipika mifehy ny vovonana, na dia tsy mazava aza hoe fitsipika inona. Tsy nisy valiny mihitsy ny fikarohana natao mikasika ny kaonty @RiazKha613, raha toa ny fikarohana ny kaonty @RiazKha723 nilaza fa “tsy misy” ilay kaonty.
Rehefa nifampiresahin'ny Outlook India, trano famoaham-baovao iray, dia nilaza ny Twitter fa tsy maneho hevitra mikasika ny fanafoanana an'ireo kaontin'olona tsirairay ry zareo. Araka ny voalazan'ny mpitondra tenin'ny Twitter manao hoe:
Noho ireo antony tsiambaratelo sy fiarovana dia tsy maneho hevitra momba ireo kaonty manokana izahay . In-droa isantaona no avoaka ao anaty Tatitray Mangaraharaha ireo fangatahana ara-dalàna alefa aty amin'ny Twitter.
Koa satria mbola miato ny fidirana amin'ny Aterineto sy amin'ireo tambajotran-telefona ao Kashmir, dia mbola manohy miresaka amin'ny Twitter sy ireo vovonana media sosialy hafa hatrany ireo vahoaka Kashmiris erantany sy ireo manohana ny adiny ho amin'ny fizakantena, mba hanehoan'izy ireo ny firaisankinany. Na dia afaka mangataka amin'ny Twitter aza ny governemanta Indiana mba hanivana an'ireo kaonty izay manitsakitsaka ny lalànany, ny fanontaniana mbola mila valiny dia ny hoe firy amin'izy ireo amin'ny farany no ho vitany ampanginina.
“Mbola marobe ireo avo feo no maneho hevitra eo amin'ny Twitter sy FB manohitra ny fanjanahantany sy ny fibodoana ataon'ny Indiana, ary koa ny #StandingWithKashmir”, nanoratra teo amin'ny Facebook i Mary Scully, izay ny kaontiny dia anisany iray amin'ireo kaonty valo tokony ho foanana.”